पशुपतिमा नन्दिताको नखरा – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०४:४० English
पशुपतिमा नन्दिताको नखरा
काठमाडौं । पशुपति वनकालीका पण्डितहरु समेत छक्क परेछन् । कालो चश्मा, जिन्स पाइन्ट लगाएकी आधुनिक युवती बोलबम भनिरहेकी छे । कतै सिनेमाको सुटिङ त भइरहेको छैन ? छिनमै थाहा भो, यो त नायिका नन्दिता केसीको नखरा पो रहेछ । उनी पशुपतिनाथको दर्शन र पूजा गर्न सोमबार करिब १० बजे पशुपति क्षेत्र पुगेकी थिइन् । ‘सबैले मलाई हेरिहेका थिए, शुरुमा त पण्डितहरु समेत छक्क परे । तर चिनेपछि उहाँहरुले नै मलाई विशेष पूजा गर्न अग्रभागमा पुर्‍याउनुभयो,’ नन्दिताले भनिन् ।
पछिल्लो समय फिल्म पाउन छोडेकी नन्दिता फुर्सदमै छिन् । उसै पनि फुर्सदमा समय कटाउने उपयुक्त थलो मन्दिर नै रहेको उनी बताउँछिन् । सोमबार पनि ६/७ जना आफन्तसहित पशुपति पुगेकी नन्दिताले करिब दुई घण्टाभन्दा बढी समय पूजा गरेरै बिताइन् रे । अझै उनी शिवलिंग बनाउन अर्को सोमबार पशुपति पुग्नेछिन् । ‘धार्मिक काममा लाग्दा मनमा शान्ति आउँछ,’ उनको तर्क छ, ‘मैले यो काम गर्दा मिडियाले यसरी फलो गर्छ भनेर सोचेकै थिइँन ।’
चर्चामा नआउने भए फेसबुकजस्तो सामाजिक सञ्जालमा फोटो किन टाँसेको त ? फेसबुक जीवनको अभिन्न अंग भएकोले केही नसोची अपलोड गरेको नन्दिताले तर्क गरिन् ।
नन्दिता कतिसम्म धर्मभीरु नायिका हुन् भने उनले ६ वर्ष साउने सोमबारको ब्रत लिई साँगे गरेको तीन वर्ष मात्रै भएको रहेछ । बिहीबार बंगलामुखी, मंगलबार गणेश मन्दिर उनी प्रायः नटुटाई पुग्छिन् रे । पर्दामा ओझेल परेपनि मठमन्दिरजस्ता सार्वजनिक थलोमा पूजा गरेरै भएपनि उनले आफ्नो प्रचार भने गरेकै छिन् । तर उनी सिनेमा पाउन छोडेको भन्दा पनि चुजी बनेको भनेर यसको बचाउ गर्छिन् ।
९ श्रावण २०६९, मंगलवार ०३:५२ मा प्रकाशित